Cala Macarella, otu n’ime osimiri kachasị mma na Menorca | Akụkọ Njem
Luis Martinez | | Menorca, Osimiri
Cala Macarella bụ otu n’ime osimiri kachasị mma na Agwaetiti Menorca. Emi odude ke ndịda ọdịda anyanwụ, dị nnọọ nso na obodo mara mma nke Citadel, isi obodo oge ochie nke agwaetiti ahụ, kwa afọ ọ na-anabata ọtụtụ puku ndị njem nleta chọrọ ka ese foto na ya.
Dị ka a ga-asị na arịrịọ nke obere cove a gụrụ site na nzu nzu na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye na-amaghị nwoke ezughi, n'akụkụ ya ị nwere Kala Macarelleta, nke nwere obere akụkụ ma dị mma maka omume ịgba ọtọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere Cala Macarella, anyị na-agba gị ume ka ị gụọ akwụkwọ.
1 Kedu ihe bụ Cala Macarella?
1.1 Ọgba ndị dị n'okpuru mmiri
2 Otu esi aga Cala Macarella
3 Gburugburu Cala Macarella
Kedu ihe bụ Cala Macarella?
Ihe mbu anyi kwesiri igosi gi banyere Cala Macarella bu na o nwere ihe ojoo. Aja ya na-acha ọcha na mmiri na-acha anụnụ anụnụ turquoise ga-adọrọ mmasị gị. Ọ bụkwa ebe zoro ezo na-echebe site obere ugwu nke nkume siri ike, dị ka anyị gwara gị, n’ime ha ka e kpụrụ ọgba na, kemgbe oge ochie, ejiwo dịka ebe mgbaba iji nọrọ na ngwụsị izu.
Na akụkụ ihu ya, ị nwere akwụkwọ Osisi paini na iru osimiri n'onwe ya na-akpali odida obodo nke dunes. N'agbanyeghị na ọ bụ ebe dịpụrụ adịpụ, n'oge ọkọchị oke osimiri jupụtara. Enwere ndị njem ole na ole na-aga agwaetiti Menorca na-anaghị eleta ya. Onye ọ bụla chọrọ, ma ọ dịkarịa ala, ka ọ bịakwute ya na-ese foto na ebe dị ebube.
Na mgbakwunye, ọ nwere nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri ebe ị nwere ike iri nri tupu ịlaghachi n'ụsọ osimiri. Maka ihe a niile, ikekwe ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na ị gara Cala Macarella n'ime primavera ee mmalite ọdịda iji nwekwuo obi iru ala.
Ọgba ndị dị n'okpuru mmiri
Cove mara mma nwekwara nnukwu ọgba dị n'okpuru mmiri nke ị nwere ike ịga leta mgbe ị na-eme ya okpokoro. Iji chọta ha, ị ga-egwugharị site na aja aja n'akụkụ akụkụ ugwu dị n'aka ekpe. N'ihe dị ka otu narị mita na iri ise, ị ga-ahụ oghere ndị a. Ha bụ mkpụrụ nke okike karst nke okwute ndi n’ahu n’akuku mgbidi nke gbawara n’akụkụ osimiri ma dikwa n’elu oke osimiri, dika anyi kowara na mbu.
Otú ọ dị, ala mmiri nke Cala Macarella adịghị adọrọ mmasị karịsịa. Ha nwere aja ma nweghi oke ahihia na ahihia na ugbo. Gaghị ahụ ụfọdụ ụdị algae, ụfọdụ azụ na sponges na, na obere ihu ọma, tapaculo (azụ yiri nke naanị) na-abanye na ájá dị na ala.
Otu esi aga Cala Macarella
Ọzọ nke nnukwu mma nke a obere osimiri nwere na-esi na-esi ebe ahụ. I nwere ike ime ya site n'okporo ụzọ, ma anyị na-adịghị ekwu okwu banyere na, ma banyere a mara mma hiking ụzọ: na Camí de Cavalls.
Pathzọ nke gbara agwaetiti Menorca dum ama site na aha a kemgbe Middle Ages, mgbe eze Jaime II Ọ kpọpụtara iwu nke manyere ndị Menorcans ịnyịnya iji chebe agwaetiti ahụ pụọ na mwakpo ndị ohi.
Ugbu a, ụzọ a mara mma, nke na-enye gị ala mara mma, a na-arụzigharị ya ma kee ya ụzọ. Otu n'ime ha, otu na-ejikọ ndị cove Turqueta na Galdana, na-agafe Cala Macarella. Mgbe ị gachara njem otu awa site na oke ọhịa na ndagwurugwu na-enye gị echiche dị egwu, ị ga-abata na Macarella. Obere oge, ọ bụrụ na ị gbanwee aka nri, ị nwekwara ike ịga Cala Macarelleta.
Camí de Cavalls n'akụkụ Cala Macarella
N'aka nke ọzọ, ebe ọ bụ na ịnarala Camí de Cavalls ma ọ bụrụ na ịchọta n'ike, ị nwere ike ịgbaso ya Cala Galdana, ihe ijuanya ọzọ nke ọdịdị Menorcan, na-agabiga ọtụtụ echiche na-enye gị ala na-enweghị atụ.
Otú ọ dị, dị ka anyị kwuru, ị nwekwara ike nweta Macarella site okporo ụzọ. Enwere ụgbọ ala na osimiri a Citadel. Ma, ọ bụrụ n’ịchọrọ ịme ya n’ụgbọala gị, ị ga-enwerịrị ụzọ na-eduga osimiri ndịda, na ntụziaka iji Saint John nke Nkume. Mgbe ntụgharị ya Cala TurquetaGa-abata n’ọdụ ụgbọ ala, nke a na-akwụ ụgwọ ma ọ dị ihe dị ka nkeji iri na ise site na Macarella.
Gburugburu Cala Macarella
Zuru ezu zuo ezu gị gara a osimiri bụ obodo Citadel, na-enweghị mgbagha akụkọ kachasị akụkọ na Menorca. Ọ bụghị n'efu, ọ bụ isi obodo ya ruo 1714, mgbe ndị bekee biri ya. Ugbu a bụ isi obodo Mahon, ma nnukwu ihe ncheta dị na Ciudadela.
Ikekwe ihe kachasị mma n'obodo ahụ bụ ya ochie obodo, kpụrụ warara n'okporo ámá na peculiar aha (ọmụmaatụ, «Que no pasa») na nke converge na katidral nke santa maria. Nke a bụ ihe mara mma Catalan Gothic ịke ewu wuru na narị afọ nke XNUMX na nke Plọ ekpere nke mkpụrụ obi, emere na nke iri na asatọ na-eso canons nke Baroque.
N'ime etiti akụkọ ihe mere eme nke Ciudadela ị nwere isi ihe ndị ọzọ nwere mmasị. Iji maa atụ, A mụrụ square, ebe ị ga-ahụ obelisk nke na-echeta mmeri e meriri ụgbọ mmiri ndị Turkey nke Admiral Pialí nyere iwu na 1558. You nwekwara ike ịga leta ebe obibi ndị mọnk nke San Agustín, site na narị afọ nke XNUMX na n'ime nke ị ga-ahụ ihe ngosi nka diocesan na-atọ ụtọ. Nke a, na mgbakwunye na ịkpụ ọla edo nke okpukpe, nwere akụkụ nke ndị nna ochie omenala talayotic, mepụtara na Agwaetiti Balearic na Ọla nchara na Iron afọ.
Isi ihe ọzọ mara mma nke Ciudadela bụ ọdụ ụgbọ mmiri, ebe i nwere ike ihu ihe ojoo nke rissaga. N’okpuru ụfọdụ ọnọdụ ikuku, oke osimiri na-ebili ma na-ada ruo mgbe ọ ga-erubiga ókè. Obi ga-atọ gị ụtọ ịhụ ka ụgbọ mmiri si na-ebugharị na njedebe nke mbuso agha mmiri ahụ.
Catlọ Katidral Citadel
Emegharị ahụ na-akpọrọ gị gaa nnukwu ụlọ nke San Nicolás, wuru na narị afọ nke XNUMX iji chebe obodo ahụ pụọ na mwakpo ndị iro. Na ụlọ ndị ọzọ na-adọrọ mmasị nke Ciudadela sol el Obí nke Torresaura, nke na-azaghachi Levantine Gothic na Ụlọ Nzukọ Alaeze, nke ewuru n’elu ebe ewusiri ike ochie.
N'aka nke ọzọ, n'okporo ụzọ si Ciudadela gaa Mahón, ị ga-ahụ olili ozu a nke bụ nke Omenala Talayotic ihe anyị kwurula banyere ya. Ọ na-efu otu nkume n'akụkụ ya nke elu. Ma, ọ bụrụ na anyị ga-a heeda ntị n'akụkọ ifo, nke a nwere nkọwa dị omimi.
Ndị dike abụọ nọ na-achọ ịlụ nwa agbọghọ n'anya. Iji kpebie onye n’ime ha kwesịrị ịlụ ya, otu kwere nkwa igwu ruo mgbe ọ ga-achọta mmiri, ebe nke ọzọ ga-arụ ụgbọ mmiri e ji okwute rụọ. Mgbe nke ikpeazụ na-ewere nke ikpeazụ iji wuchaa ya, ọ nụrụ ka onye nke ọzọ tiri mkpu na ya achọta mmiri ahụ. Mgbe ahụ, nke mbụ, nke meriri wee iwe, tụbara okwute ahụ na-eduga n’olulu ahụ, wee gbuo onye ya na ya na-azọ. Jọ jidere ya, ọ gbapụrụ ma ọ nweghị onye lụrụ nwa agbọghọ ahụ.
Na mmechi, Cala Macarella Ọ bụ otu n’ime osimiri kachasị mma na Menorca ma n’ihi ájá ọcha ya na mmiri na-acha anụnụ anụnụ nke pọktọs na ọmarịcha gburugburu ya. Gaa n'ihu ma gaa na ya. Will gaghị akwa ụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Menorca » Cala Macarella